Scania na-ekwupụta CarPlay maka ụgbọ mmiri ya na-amalite n'oge ọkọchị | Esi m mac
Scania na-ama ọkwa CarPlay maka ụgbọ ala gwongworo ya site na ọkọchị
O doro anya na gwongworo na-agbakwunye na teknụzụ na-eme ka anyị nwee obi eziokwu na ọ bụ ihe ijuanya na n'oge a ọtụtụ ụdị na ndị na-emepụta ụgbọ ala ndị a enweghị nhọrọ nke iji carPlay. N'ezie, enwere ọtụtụ nhọrọ iji zere inwe mmekọrịta na ekwentị mgbe ị na-anya ụgbọala na ọ bụ ihe doro anya na ndụmọdụ amamihe dị na ya ịghara imetụ ya aka mgbe ị na-anya ụgbọala, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị nwere nnukwu ụgbọala na-adọkpụ. Na nke a ọ dị ka mwekota nke CarPlay n'ime ugbo ala ndi a site n'aka onye nyocha Scania.
E hiwere Scania na 1900 Taa, ndị Sweden na-arụ nnukwu ụgbọala, bọs na mmanụ dizel hibere na Södertälje, Sweden. Ọ ghọrọ akara nke itoolu nke Volkswagen Group nwere mgbe Volkswagen mụbara oke ya na ụlọ ọrụ ma taa ọ bụ otu n'ime ụdị ndị kachasị mkpa na mpaghara ụgbọ ala. Teknụzụ nke soro gwongworo na ụgbọ ala nke ụlọ ọrụ ahụ dị oke egwu ma ugbu a na mmejuputa oge ọkọchị nke CarPlay, ha nwere olile anya iwere nfe ọzọ na ogo na nchekwa nke gwongworo ha.
Na Spain enwere ọtụtụ ụgbọ ala ndị nwere CarPlay webatara ka onye ọrụ ahụ ghara imetụ ihe ọ bụla aka na ngwaọrụ mgbe ọ na-anya ụgbọala ma jiri Siri rụọ ọrụ, mana ọ bụ eziokwu na sistemu ahụ ka dị ntakịrị taa ma anyị nwere olile anya na Apple ga-agbakwunye mmelite na onye inyeaka ụgbọ ala, yana ngwa ọhụrụ nke na-eme ka ọ dị mfe iji na ndị ọzọ. Ihe dị mkpa dị ka mgbe niile nọdu l'ụzo ụzo ma dokwaa iPhone anyi n’akuku.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Scania na-ama ọkwa CarPlay maka ụgbọ ala gwongworo ya site na ọkọchị
Apple weputara Safari Technology Preview 27